ICosta Dorada - Ongakubona nokuthi wenzeni eholidini lakho elilandelayo | Izindaba Zokuhamba
USusana godoy | 08/04/2021 11:03 | Izindawo zokuvakasha
Ungathanda ukuthatha uhambo olukhulu uhambe ngeCosta Dorada? Ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu ngejografi yaseSpain futhi futhi inenye yezinto ezithakazelisa kakhulu. Itholakala eningizimu-ntshonalanga yeBarcelona futhi inamabhishi angapheli kanye nezindawo zokungcebeleka ezenza kube mnandi kakhulu, uma kungenzeka.
Kepha kuyiqiniso lokho Le ndawo ingaphezulu kakhulu kwamabhishi ngakho-ke, umzila wamasiko, ogcwele izindaba ngisho nezinsumansumane, nawo uyasondela ngaye. Ngakho-ke, awukwazi ukuphuthelwa yikho konke ongakuvakashela nokuthi yini ongayenza eholidini lakho. Uzoba nakho konke kutholakale kalula! Ingabe ukulungele ukukujabulela?
1 ITarragona, elinye lamaphoyinti abaluleke kakhulu okuqala eCosta Dorada
2 Ukuhamba ngasogwini lwayo
3 Indawo yokuhlala noma amatende?
4 Ukuvakashela ipaki yengqikimba yaseSalou
5 Impilo kaGaudí eRus
6 Siqala ngomzila weCistercian!
7 Zulazula e-Ebro Delta
ITarragona, elinye lamaphoyinti abaluleke kakhulu okuqala eCosta Dorada
Kunezindawo eziningana ezihlanganiswe yiCosta Dorada, kepha ngaphandle kokungabaza, iTarragona ithatha indawo yokuqala. Singasho ngaye lokho Ibukeka njengemyuziyamu evulekile, sibonga konke enakho ukusikhombisa ezindaweni ezibizwa ngamanxiwa eTarraco. Sizothatha izinyathelo ezimbalwa emuva ngesikhathi ukuthola amabhuloho, imibhoshongo efana naleyo yamaScipios kanye nodonga lwawo oludala, olungabuyeli ezikhathini zamaRoma. Konke lokhu kwakha enye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokuvubukula, ezinamagugu wangempela, okufanele aziwe. Ngaphezu kwalokhu, awukwazi ukuphuthelwa ukuhambela kwakho eCathedral yaseSanta Tecla, iMirador del Mediterráneo noma iPort.
Ukuhamba ngasogwini lwayo
Sisuke ekuhambeni ngesikhathi sibuyele kulesi sikhathi samanje sathola wonke amabhishi aso. Ngoba kuyindawo lapho izindunduma zesihlabathi zizohlala zikhona, kuhlanganiswe nalawo manzi amakristalu abathandana nawo kakhulu. ILa Pineda ingelinye lamabhishi amahle, angaphezu kwamakhilomitha amabili ubude lapho ungazijwayeza ukuntweza phezu kwamanzi noma ukutshuza emanzini. ICala Fonda, eyaziwa nangokuthi yiWaikiki, isenyakatho neTarragona futhi ingenye yezindawo ezithule kakhulu. Ngenkathi iSantes Creus Beach, lapho ukubukwa kwayo nokubonakaliswa kolwandle, izokuhlaba umxhwele. Ukuphumula nomndeni futhi uzungezwe amahlathi ephayini yiCap Roig Beach.
Indawo yokuhlala noma amatende?
I-adventure yohambo kwesinye isikhathi iqala ngendawo yokuhlala ebesiyifunile. Ngoba uma sikhuluma ngamabhishi akha le ndawo, izindawo zokungcebeleka, ngokuningiliziwe, zizoba yizimbangi. Kepha uma ufuna ukubheka okuthile okonga kakhulu, okusebenzayo kanye nomndeni wonke, ungakhetha futhi i- Ikanise eCosta Dorada. Ngale ndlela uzohlala usesimweni esizolile futhi-ke, ungajabulela indawo yasemaphandleni nolwandle lapho uzizwa uthanda ngayo nazo zonke izinsizakalo osusondele kuzo.
Ukuvakashela ipaki yengqikimba yaseSalou
Ngoba ngaphezu kwamabhishi kanye nezokuvakasha eziningi, uSalou ubuye abe ne- Ipaki yetimu yePortAventura World. Ngakho-ke kungaba okunye kokuhambela okungaphezulu kwesibopho, ikakhulukazi uma uhamba nezingane zakho. Ngoba ngale ndlela ungakujabulela konke okukhangayo njengomndeni futhi kuzoba yisikhuthazo kubo. Vele, uSalou ubuye akunikeze izindawo ezikhethekile njengenqaba yaseTorre Vella, uma ufuna ukujabulela ingxenye yamasiko kakhulu yale ndawo.
Impilo kaGaudí eRus
Futhi awukwazi ukuphuthelwa ukuhamba ngeReus, njengoba kungumbhede waseGaudí nakho konke lokho okuhlanganisayo. Kusukela kwaphela iminyaka eminingana ehlala kule ndawo futhi namuhla kuyisikhumbuzo esihle somculi, ekhoneni ngalinye laso. Ungajabulela okwakuyikhaya lakhe kanye neGaudí Center, okuyisikhungo sokuhumusha esisePlaza del Ayuntamiento. Kuyo, ungathola izinto zomuntu siqu zomculi futhi, kukhona igumbi elinokukhiqizwa kabusha komsebenzi wakhe.
Siqala ngomzila weCistercian!
Kungumzila ongawenza ngezinyawo noma ngebhayisikili uma uzizwa uthanda kakhulu. Kulo mzila onayo izitobhi ezintathu eziyimpoqo eziyizigodlo ezintathu: iVallbona, iPoblet neSantes Creus. Indawo engaphelele ukuthola ingcebo yayo yezakhiwo, okusobala, kepha naku-gastronomy futhi nakwezobuciko. Ngakho-ke, kungenye yalezi zinketho lapho lapho sivakashela iCosta Dorada, nakho kuhambo lwethu.
Zulazula e-Ebro Delta
Ukuvakashela ipaki ye-Delta del Ebro kungenye yamaphuzu ayisisekelo ukucabangela. Njengoba kuyo uzothola izinhlobo eziningi zezilwane. Kepha ngaphezu kwalokho, ikunikeza okunye kokuhlangenwe nakho okuhle ongakujabulela futhi ukukhumbule impilo yakho yonke: Ukuhamba ngesikebhe unqamule i-Ebro Delta. Kuzwakala kukuhle kanjani lokho? Yebo, ungangena emlonyeni womunye wemifula ebaluleke kakhulu, ujabulele imvelo namabhishi ayo. Unemizila ecishe ibe ihora, kuze kufike cishe usuku. Uzoqala ngaphi iholide lakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Ukuhambahamba ngeCosta Dorada: Yini ongayibona nokuthi wenzeni